Wararkii ugu dambeeyay xaaladda MUQDISHO - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyay xaaladda MUQDISHO
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa la xiray waddooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan waddooyinka kasoo baxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee yimaada madaxtooyada Soomaaliya.
Ciidamo badan ayaa la dhigay waddooyinka iyadoo ilaa xalay ay nadaafad ka socotay wadada Maka Al Mukarama iyo waddooyinka kale ee magaalada Muqdisho, maadaama maanta la filayo inay magaalada soo gaaraan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Eritrea.
Wafdiga madaxweynaha Eritrea waxaa kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wasiiro iyo ganacsato u dhalatay dalkaasi Eritrea, sida wararka aan ku heleyno.
Wafdiga ayaa muddo labo maalin ah oo maanta ka bilaabaneyso ku sugnaan doono magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan madaxweynaha Soomaaliya.
Waa markii ugu horreysay oo uu yimaado Magaalada Muqdisho xilli horay uu Muqdisho u soo gaaray Wasiirka Arrimaha dibadda dowladda Eritrea.
Calanka iyo Sawirka Madaxweynaha Eritrea ayaa lagu sharaxay wadooyinka Muqdisho, waxaana lagu waddaa in garoonka Muqdisho uu kusoo dhaweeyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.